Farmaajo oo xaalada ku xun tahay iyo xarunta madaxtooyada Somalia oo shir uga furmay isaga iyo Beesha caalamka
Saturday January 30, 2021 - 13:57:50 in Wararka by Editor in Chief
Sunatimes.com - Villa Somalia waxaa ka furmay shir u dhaxeeya Farmaajo iyo saaxiibada beesha caalamka taas oo looga arrinsanayo arrimo la xiriira doorashooyinka. Warbaahinta maxaliga ah ayaa baahisay sawiro xubnaha beesha caalamka oo sii galaya mada
Sunatimes.com - Villa Somalia waxaa ka furmay shir u dhaxeeya Farmaajo iyo saaxiibada beesha caalamka taas oo looga arrinsanayo arrimo la xiriira doorashooyinka. Warbaahinta maxaliga ah ayaa baahisay sawiro xubnaha beesha caalamka oo sii galaya madaxtooyada, waxaana la sheegay iney kulan la yeelanayaan Farmaajo, iyadoo ay jirto in safiirka mareykanka ee Soomaaliya uusan kulanka qeyb ka aheyn.
Villa Somalia waxaa ka furmay shir u dhaxeeya Farmaajo iyo saaxiibada beesha caalamka taas oo looga arinsanayo arrimo la xiriira doorashooyinka.
Warbaahinta maxaliga ah ayaa baahisay sawiro xubnaha beesha caalamka oo sii galaya madaxtooyada, waxaana la sheegay iney kulan la yeelanayaan Farmaajo, iyadoo ay jirto in safiirka mareykanka ee Somalia uusan kulanka qeyb ka aheyn.